Yakakwira Pressure Jekiseni Grouting Packer
Yakakwira Pressure Injection Grouting Packer, inogadzira kubva kuAluminium, inogona kushanda pa10 MPa / 1465 psi / 100 bar kumanikidza, iri nyore kushandisa, nyore kubaya, inogona kushandisa pane yakaderera tembiricha; imwechete chinhu grouting, yakapusa kuvaka, nyore kuchenesa. Simbi yekuisa chisimbiso inogona kunge iri mvura base polyurethane, mafuta base polyurethane uye epoxy resin. Tine hukuru hwakaenzana, 10 * 80mm, 13 * 85mm, 13 * 100mm, 13 * 150mm. Mamwe ese saizi aripo. Yakareba kurongedza pamusoro pe15cm ndeye yakasununguka chimiro; Pfupi kurongedza 8.5cm kana 10cm ndeyezvizhinji zvivakwa.
Sechikamu chakakosha che grouting muchina, unoshandiswa zvakanyanya mukuvhara mvura kweimba yekushongedza indasitiri, kunyanya inoshandiswa jekiseni re polyurethane inopupuma mumiririri kana epoxy resin mumakonki ekongiri netekinoroji yekumanikidza-makemikari grouting uye plugging.
1.Kudzivirirwa kwemvura kwekongiri kutsemuka muchitima chepasi pevhu, mugero, mupendero uye pombi yekurasa tsvina
2. Kuvhara mvura kwekongiri kutsemuka muchitsime, pevhu pevhu uye nepasi pevhu.
3. Kudzivirirwa kwemvura kwepakati-pamadziro pombi uye makona emadziro.
4. Kudzivirirwa kwemvura kwematongerwo ezvimiro muzvivakwa zvekongiri, danda, mbiru uye puranga.
Hydrophilic Polyurethane (WPU) uye Hydrophobic Polyurethane (OPU) furo inomira kuburitsa mumiririri, Epoxy Resin.
Manotsi kana Grouting
1. Mira kupomha kana polyurethane isingabudise kubva mukutsemuka mushure memaminitsi mashanu. Uye edza zvakare gare gare. Kana isati yazara, inofanirwa kutarisa kuti pombi yakavigwa-yakaboorwa kana pasi ine maburi uye zvichingodaro.
2. Kuiswa mukati kunofanira kutariswa zvakaringana geji yebasa perfusion muchina, kana ichidarika iyo yakamanikidzwa kumanikidza (45Mpa pamusoro), inofanirwa kuvharwa, kana kumanikidzwa ikaramba yakakwira, kutsemuka kunofanira kutarisa kana kuchera kuchipaza nekupaza.
Kutakura / Kurongedza
Kurongedza Saizi: 1500pcs / Carton kana 1000pcs / Carton
Kufambisa neMhepo: Kusvika mukati memazuva maviri kusvika manomwe mushure mekugamuchira mubhadharo, kusanganisa kupera kwevhiki nemazororo.
Kutakurwa neChikepe: Kununurwa mukati memazuva maviri nemashanu mushure mekugamuchira mubhadharo, kusanganisa kupera kwevhiki nemazororo.
Detail: 40 makatoni pahomwe (1 * 1 M)
Zvinoshanda Maindasitiri:Zvivakwa zvekutengesa
Mushure meWarranty Service:Vhidhiyo technical technical
Machina Kwayedza Chirevo:Provided
Rudzi rwekushambadzira:Hot Chigadzirwa 2019
Garandi yezvinhu zvepakati:1 Gore
YAKASIYANA KUTENGA Pfungwa:Simba rekuchera rakakwirira
Kudzivirira mvura Machine
Polyurethane Foam Kuzadza Muchina
Yemunharaunda Service Nzvimbo:Canada, Germany, Viet Nam, Saudi Arabia, Russia, Malaysia, Australia, UAE
Nzvimbo yekuratidzira:Germany, Viet Nam, Saudi Arabia, Russia, South Korea, Malaysia
Mushure mekutengesa Service Yakapihwa:Vhidhiyo technical technical, Overseas sevhisi nzvimbo inowanikwa
Pashure: jekiseni grouting packers simbi Yakakwira Pressure Aluminium A10 Grout Injection Packer
Zvadaro: Brass ruvara Injection Packers simbi 13 * 150mm A15 grouting jekiseni packers
jekiseni grouting packers simbi Yakakwira Pressure ...
Professional High Pressure Grout A15 jekiseni ...
Golden coupler OEM Hexagon Stainless Steel Grea ...
Flat Head munyatso M8 jekiseni Packers simbi 16 * ...